रुपबजारकी नोरा | मझेरी डट कम
kbs — Wed, 10/15/2008 - 19:31
'भो बुझ्नु पर् या छैन तिमीलाई । यसभन्दा अगाडि जान हामीलाई अनुमति छैन ।' पूर्णिमाले भनी ।
कुराकानी त्यत्तिकै सकिएको केही महिनासम्म दुई जनाकॊ भेटघाट भएन ।
सिद्धार्थ सधैँ पूर्णिमाको पसलअगाडि चक्कर लगाउँथ्यो । 'क्या हो बाबु ! हाम्रो पनि त पसल छ जाने होइन ' सधैँ कोही न कोही उसको नजिक आएर सोध्थे । यसबीच थुप्रै अनुहार दोहोरिए । थुप्रै नयाँ अनुहार थपिए । अहँ पूर्णिमा कतै देखा परिन ।
आज चाहिँ ऊ एकजना सम्बोधनकर्ताको पछि लागेर गयो । पसलमा पुग्नेबित्तिकै उसले सोध्यो 'अचेल पूर्णिमालाई देख्दिन नि ! कहाँ गई '
'को पूर्णिमा बाबु यहाँ कति चाँदनी कति पूर्णिमा आए गए । तपाईंले कसलाई खोज्नुभएको हो ' पसल्नीले इत्तरिएको पारामा भनी । सिद्धार्थले हुलिया दियो ।
'ए ऊ ! त्यसको तकदीर बडो राम्रो रैछ । एक जना खानदानी बाबु आएको थियो । लिएर गयो । महारानी झैँ गाडीमा सवार भएर गई… ।' पसल्नीको कुरा नसकिँदै सिद्धार्थ त्यहाँबाट हिँड्यो ।
एक साताको एकान्तबासमा उसले पूर्णिमाको मुहारचित्र बनायो र आफू सुत्ने कोठाको भित्तामा टाँस्यो । पूर्णिमाको मुहारको भाव पढ्यो। आँखाको चमक पढ्यो। ओँठको प्यास पढ्यो। गालाको मादकता पढ्यो। सातादिन पछि उसले त्यो मुहारचित्र बजार नजिकैको आर्ट ग्यालरीमा राखिदियो । पछिल्लो समय उसलाई पैसाको निकै खाँचो पर् यॊ । काम नगरेको महिनौँ भएको थियो र पुराना दृश्यचित्रहरु बिक्री भइसकेका थिए ।
सिद्धार्थ अर्को एक साता एकान्तबासमा रह्यो । पुरानो चित्रको बाँकी पैसाले केही बोतल रक्सी किन्यो । अहोरात्र रक्सीमै डुबेर बस्यो । आठौँ दिन उसले खाटमुनिका बोतलहरुको पीँधमा थिग्रेको थोपाथोपा सँगालेर एक पेग जति बनायो । पियो र ऐनाअगाडि उभियो । झुस्स बढेको दाह्रीमा एकछिन त उसले आफैँलाई चिनेन ।
'वा लियोनार्दो दा भिन्ची !' एक्लै बर्बरायो ऊ 'मोनालिसा खोई त ' झल्याँस्स पूर्णिमाको स्केच सम्झ्य । हतारहतार बाहिर निस्क्यो ।
आज बजारमा त्यति चहलपहल थिएन । अस्तिकी पसल्नी उसलाई देखेर उता फर्केको सिद्धार्थले सहजै चाल पायो । 'तँलाई रन्… ।' उसले मनमनै भन्यो ।
उसलाई देखेर ग्यालरीको मालिक बाहिरैसम्म लिन आयो । सम्मानपूर्वक बसाउँदै सोध्यो 'के लिने हजुर चिसो कि तातो '
मालिकको अनौठो व्यवहारले सिद्धार्थ आश्चर्यमा पर् यो । ऊ त्यही थियो जसले थुप्रै पटक सिद्धार्थको मन नराम्ररी भाँचेको थियो । 'कलाकार र वेश्या एकै हुन् । तिनीहरु रङ पोतेर शरीर बेच्छन् कलाकारहरु रङ पोतेर भावना ।' सिद्धार्थलाई ईङ्गित गर्दै उसले यो संवाद बोलेको धेरै भएको थिएन ।
'रातो छैन ' सिद्धार्थले भन्यो ।
'अरे हजुर तपाईँ भन्नुस् मात्रै म सारा बजार उठाएर ल्याइदिन्छु ।' मालिकले चिल्लो घस्यो ।
'भैगोभैगो पर्दैन । अस्तिको चित्र किन्ने कुनै ग्राहक भेटियो '
चित्र किन्ने मान्छेसँग सिद्धार्थकॊ एउटा शर्त हुन्छ- चाहिएको बेला उसले चित्र फिर्ता लिन सक्छ । बरु त्यसका लागि चार गुणा बढी पैसा तिर्नेछ । अहिलेसम्म सयौँ चित्र बनाएर बेचिसक्यो । कुनै फिर्ता मागेको छैन । तर पनि ऊ यो पुरानो शर्तमा कायम छ । ग्यालरीलाई भने राखिदिएबापत बिक्रीमूल्यको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म दिन्छ ।
'किन नभेटिने हजुर भेटिएको छ । मूल्य पनि राम्रै तिर्छु भनेको छ । तर…!' मालिकले कुरा चपाउँदै भन्यो ।
'तर के '
'ऊ तपाईँको शर्त मान्न तयार छैन ।' मालिकले नम्रतापूर्वक जवाफ फर्कायो ।
'त्यसो भए म पनि चित्र बेच्न तयार छैन ।' सहज जवाफसँगै आफ्नो कठिन परिस्थिति सम्झ्य र सोध्यो 'किन अरे '
'खै त्यो त मलाई थाहा भएन । तर ऊ मागेको मूल्य तिर्न तयार छु भन्दै थियो ।'
'कति दिन सक्छ त्यसले दस लाख ' सिद्धार्थ आवेगमा आयो ।
'हो दस लाख । म प्रेमको कुनै पनि मूल्य तिर्न सक्छु ।' अनायासै झुल्किएको ग्राहकले भन्यो ।
मालिकले उसलाई झुकेर अभिवादन गर्यो 'सलाम वालेकुम खान साहब ।' उसले उभिएरै अभिवादन फर्कायो 'वालेकुम सलाम ।' ग्राहक हेर्नमा हट्टाकट्टा नै देखिन्थ्यो । खानदानी । अभिमानी । न धेरै मोटो न दुब्लो । गहँुगोरो वर्णको । कुरा गरिरहँदा उसको शरीरबाट निस्केको अत्तरकोभन्दा मुखबाट निस्केको रक्सीको गन्धको प्रभाव बढी थियो ।
'उहाँ खान साहब । अरबाज खान । उहाँ नै हो ग्राहक ।' मालिकलॆ परिचय गराउँदै भन्यो 'उहाँ सिद्धार्थ विनायक । उहाँकै हो चित्र । तपाईँहरु आफैँ कुरा गर्नुस् ।'
'तपाईँ यो चित्र किन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ ' केही बेरको मौनतापछि सिद्धार्थले सोध्यो ।
'मैले यसलाई प्रेम गर्न थालेको छु । म सजीव वस्तुका असीमित अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भएको छु । तर सजीवतादेखि टाढा रहन पनि सक्तिनँ । यो चित्र निर्जीव छ । यसका कुनै अपेक्षा चाहना छैनन् । साथसाथै सजीव पनि जसलाई म दिल खोलेर प्रेम गर्न सक्छु ।'
'हुन त यो मेरो पि्रय चित्र हो । अहिले मलाई पैसाको खाँचो छ ।'
'राम्रॊ । तर तपाईको शर्त !'
'मैले आजसम्म यसरी नै सयौँ चित्र बेचेको छु । यो शर्त संशोधन गर्ने अनुमति मेरो दिमागलॆ मलाई दिँदैन ।'
'प्रेममा शर्त ! अहँ । बरु म यसका लागि जुनसुकै मूल्य तिर्न तयार छु ।'
त्यसो त सिद्धार्थले अहिलेसम्म कुनै पनि चित्रको पाँच हजारभन्दा बढी मूल्य पाएको छैन । धनाढ्य ग्राहकका लाखौँ-लाखको कुरा र अतिशय भावुकताले उसका सपना झािङ्गिदै जान्छन् । 'सायद यो मेरो जीवनको अन्तिम चित्र हुनेछ । यससँग मेरो जीवनको सपना गाँसिएको छ । म एउटा कार किन्न चाहन्छु । म एउटा आफ्नै घर बनाउन चाहन्छु । फेरि मलाई विवाह पनि गर्नु छ ।' यसो भनिरहँदा सिद्धार्थका आँखामा पूर्णिमा झल् झली नाचिरहेकी थिई । कानमा त्यही पसल्नीको कुरा गुन्जिरहेको थियो- 'महारानी झैँ गाडीमा सवार भएर गई ।'
'यदि मैले तपाईँलाई कार घर र मानी भने श्रीमती पिन- सबै सबै दिएँ भने नि ' ग्राहकले भावुकताको पराकाष्ठा पार गर्यो ।
ग्यालरी मालिक उत्सुकतापूर्वक संवाद सुनिरहेको थियो । 'यदि यो कुरा यथार्थमा परिणत भयो भने चित्रको कमिसनबापत मेरो भागमा के पर्ला -कार घर वा श्रीमती ' उसले अनुमान गर्न खोज्यो ।
'यो कसरी हुनसक्छ तिम्री श्रीमती…'
'किन हुन सक्दैन मैले सुनेको तिमी एउटी बेश्यालाई प्रेम गथ्र्यौ । मेरी श्रीमतीलाई प्रेम गर्न किन सक्दैनौ आखिर ऊ पनि त एउटी बेश्या नै हो । फेरि मैले कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने तिम्रा सपनाहरु पूरा गरिदिन्छु भनेकै छु त । अब तिमी बिना शर्त मलाई त्यो चित्र देऊ ।' ग्राहक तिमीमा ओर्लियो ।
जीवनमा यस्ता घटनाहरु पनि हुन्छन् जसलाई पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर त्यही भइदिन्छ । यो सब यति हतारमा भयो कि कसैलाई केही सोच्ने फुस्रद नै भएन ।
'अरे सिद्धार्थ तिमी यहाँ ' आश्चर्यचकित भएर हेरिरही केही क्षण ।
सिद्धार्थ पनि त्यस्तै भयो 'पूर्णिमा तिमी… '
तुरुन्तै परिवर्तित भावमा पूर्णिमाले भनी 'तिमी यहाँ किन आएको गइहाल यहाँबाट । मेरो लोग्नेले थाहा पायो भने दुवै जनालाई मार्छ । शायद तिमीलाई थाहा छैन- ऊ अति शङ्कालु पापी र क्रूर छ ।'
'म उसैले पठाएर त यहाँ आएको । उसले मेरो सर्वश्व लिएर गयो । बदलामा आफ्ना सबै कुरा मलाई सुम्पिएर हिँड्यो । तिमी पनि आजदेखि मेरी भयौ पूर्णिमा । '
'यो तिमी के भन्दैछौ तिमी पागल भइसक्यौ सिद्धार्थ । तुरुन्तै गईहाल मेरो अगाडिबाट ।'
'पागल म होइन तिम्रो लोग्ने थियो । नपत्याए हेर यो घरको लालपूर्जा गाडीको ब्लुबुक सबै मेरो नाममा गरिदिएको छ । अँ साँच्चै तिम्रो नाममा पनि एउटा चिठी लेखेको छ । लौ पढ ।' विजयी भावमा सिद्धार्थले भन्यो ।
पूर्णिमाले चिठी समाई । खोली र पढी । लेखिएको थियो-'पूर्णिमा मैले प्रेमका लागि आफ्ना सबै कुरा बेचिदिएँ । तिमीलाई पनि ।'
त्यो उसैको अक्षर थियो । चिठी पढिसकेपछि पूर्णिमाले विस्तारै भनी 'तर म तिम्री स्वास्नी भएर बस्न सक्दिनँ । म उसकी पनि कहिल्यै हुन सकिनँ । उसका अरु कुरा जे गर ममाथि भने तिम्रो कुनै अधिकार छैन ।'
'तिमीले अचेल मलाई मन पराउन छाड्यौ त पूर्णिमा '
'प्रेम र विवाह अलग-अलग कुरा हुन् सिद्धार्थ ।'
'जब एउटी नारी आमा दिदीबहिनी छोरी र श्रीमतीमध्ये केही पनि बन्न सक्दिनँ तब बेश्या बन्छे । जब ऊ बेश्या बन्छे तब केही बन्न सक्दिन । तिमी पनि एक बेश्या हौ । विवशताबश शरीर बेच्नु बेश्या हुनु होइन भन्ने मेरो मान्यता सायद गलत थियो ।' सिद्धार्थले आक्रोश पोख्यॊ ।
'तिमीले त मलाई कहिल्यै प्रेम नै गरेनौ । हो म पेसाले बेश्या थिएँ र फेरि पनि हँुला । तर प्रेमको मूल्य के हो त्यो एउटी वेश्यालाई मात्र थाहा हुन्छ ।' उसकै शैलीमा पूर्णिमाले भनी ।
'यो प्रेम-स्रेमको नाटक छोड । जाऊ बजारमा र तिर्खा मेट । म नै चाहिन्छ भने दुई चार दिनपछि त्यहीँ भेट्नेछौ ।' गलित स्वरमा पूर्णिमाले भनी ।
'तिमीहरु वर्षाका पानी हौ पूर्णिमा । वर्षाको पानीले तिर्खा मेटिँदैन ।' यसपटक सिद्धार्थ अ झ निर्मम भयो ।
'हो तिमीले ठीकै भन्यौ सिद्धार्थ । हामी वर्षाका पानी हौ । तर तिम्रो प्रेम पनि तिर्खा मात्र हो भन्ने कुराको प्रमाण तिम्रै भनाइमा छ । तिमीले सधैँ शरीरलाई प्रेम गर्यौ । जीवनलाई कहिल्यै प्रेम गरेनौ ।' पूर्णिमाले बाजी मारी ।
'मलाई वेश्याका आदर्श सुन्नु छैन । जाऊ । फेरि पसल थाप । खानजस्ता पागलहरुको खेती गर र बस । जाऊ गइहाल ।' सिद्धार्थ झण्डै चिच्यायो ।
'म त जान्छु नै । एउटी वेश्या किव-कलाकारका झैँ आदर्श छाँट्न जान्दिनँ ।'
त्यसपछि पूर्णिमा त्यहाँबाट हिँडी- डल्स हाउसकी नोरा झैँ ।